Phcoker म्याग्नेसियम L-threonate को एक पूर्ण उत्पादन प्रणाली संग एक पेशेवर निर्माता हो जसले म्याग्नेसियम L-threonate पाउडर को थोक आपूर्ति ग्यारेन्टी गर्न सक्छ।
1. हामीलाई म्याग्नेसियम किन चाहिन्छ?
2. म्याग्नेसियम एल-थ्रोनेट के हो?
3. म्याग्नेसियम एल-थ्रोनेट के को लागी प्रयोग गरिन्छ?
4. म्याग्नेशियम L-Threonate nootropics पूरक रूपमा लाभ
5. म्याग्नेसियम L-Threonate कसरी लिने
6. म्याग्नेसियम L-Threonate पूरक सेवन गर्दा कुनै साइड इफेक्टहरू छन्?
7. म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर प्रयोग र आवेदन
8. म्याग्नेसियम L-Threonate कच्चा पाउडर कहाँ किन्न
FA. प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
हामीलाई म्याग्नीशियम किन चाहियो?
हामी म्याग्नेशियम L-Threonate मा डुब्न सक्नु अघि नोट्रोपिक पूरक, तपाईंले यसको कुञ्जी पूर्ववर्तीको बारेमा बुझ्नु आवश्यक पर्दछ।
म्याग्नीशियम एक महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म पोषकतत्व हो, जुन सक्रिय रूपमा धेरै शारीरिक प्रक्रियाहरूमा संलग्न छ। तत्त्वको मांसपेशिको संकुचन र विश्राम, प्रोटीन संश्लेषण, र न्युरोनल कार्यहरू माथि पकड छ। यसका साथै यसले रगत चिनीलाई नियमित गर्दछ र रक्तचाप कायम गर्दछ।
जे होस् तपाईले प्रति से मैग्नीशियम लिन सक्नुहुनेछ, यी प्राय जसो पूरक चीलेट हुन्छन् वा एमिनो एसिडको बन्धन हो। चीलेशनले शोषण, स्थिरता, र खनिजहरूको जैविक उपलब्धतामा सुधार गर्दछ।
म्याग्नेशियमको एकाग्रता मस्तिष्कमा अरू कुनै भागको भन्दा अधिक हुन्छ। यसले मस्तिष्क वृद्धावस्थालाई प्लाष्टिसिटी र सिन्याप्टिक घनत्व बढाउँदै उल्टाउँदछ, जुन संज्ञानात्मक प्रक्रियाको लागि महत्वपूर्ण कारकहरू हुन्। मैग्नीशियम कमी को लागी खाताहरु द्विध्रुवी विकार, डिमेन्शिया, अल्जाइमर रोग, तीव्र मस्तिष्कमा चोट, स्किजोफ्रेनिया, दौरा, डिप्रेसन, र अन्य स्थितिहरू।
न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्यमा म्याग्नीशियमको चिकित्सीय प्रयोगका बारे झगडा गरिएको छ। कारण यो छ कि यो खनिज सजिलै रक्त - मस्तिष्क बाधा पार गर्दैन। यद्यपि यस आधारभूत खोज म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर यो पज्जलको अन्तिम समाधान भयो।
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोनेट भनेको के हो?
म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर म्याग्नीशियम र L-Threonate अणुको एक मिश्रण हो। पदार्थaको रूपमा डबल गर्दछ nootropic र न्यूरोप्रोटेक्टिव औषधि।
यसको अस्तित्व २०१० को हो जब म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका गुओसong्ग लिउ र साथी न्यूरोसाइन्स्ट्सहरूले मुसामा अनुभूतिलाई बढावा दिने एक कुशल पूरक भेटे। यो खोज हुनु भन्दा पहिले अनुसन्धानकर्ताहरूले मस्तिष्कमा म्याग्नीशियम कसरी लोड गर्ने भनेर पत्ता लगाउन सकेन किनभने खनिज रगत-मस्तिष्क अवरोधमा अवरुद्ध छ।
म्याग्नीशियम L-Threonate पूरक कृत्रिम हुन्। यद्यपि यो कुनै अन्य म्याग्नीशियम कम्पाउन्ड भन्दा बढी जैवउपलब्ध छ। यसका साथै यसले रगतको दिमाग अवरोध सजिलै पार गर्दछ, त्यसैले मस्तिष्कमा म्याग्नीशियमको कमीको लागि अन्तिम विकल्प। यौगिकले मस्तिष्कमा म्याग्नीशियमको स्तर १ 15% बढाउँदछ।
म्याग्नेशियम L-Threonate लाभ मस्तिष्क न्यूरोप्लास्सिटी बृद्धि गरेर। यसबाहेक, यसले मस्तिष्कबाट प्राप्त न्यूरोट्रॉफिक कारकहरू पनि बढाउनको लागि काम गर्दछ, जुन न्युरोनल कोशिकाको गठनमा महत्त्वपूर्ण छ।
म्याग्नीशियम L-Threonate के को लागी प्रयोग गरीन्छ?
म्याग्नीशियम L-Threonate मस्तिष्क विकारहरू प्रबन्ध गर्न उपयोगी छ। ड्रगले दिमाग कोषहरूमा म्याग्नीशियमको एकाग्रता बढाउँदछ।
साइकोनाट्सले यसको Nootropic फाइदाहरूको लागि म्याग्नेशियम L-Threonate खरीद गर्दछ। यसले एपिसोडिक मेमोरी, सीख्ने, र बृद्धि गर्ने एकाग्रता बढाउँदछ। पूरक उमेर सम्बन्धी मेमोरी नोक्सान, एडीएचडी, डिमेन्शिया, र अल्जाइमर रोगबाट पीडित बिरामीहरूका लागि पर्चेको खुराक हो।
Nonesropics पूरकको रूपमा म्याग्नेशियम L-Threonate लाभ
संज्ञानात्मक कार्यहरू बढाउँदै
मैग्नीशियम सजिलै Threonate तत्व को कारणले रगत दिमाग अवरोध पार गर्दछ। यो अणु synaptic घनत्व र neuronal स्थानान्तरण को वृद्धि को लागी जिम्मेदार छ।
म्याग्नीशियम L-Threonate लिनाले मानसिक कार्यक्षमता, एकाग्रता, र कार्य गर्ने मेमोरी बढाउँदछ। प्रकाशित क्लिनिकल परीक्षण अनुसार, यस पूरक लिने अध्ययन विषयहरूले एपिसोडिक मेमोरी, कार्यकारी समारोह र ध्यानमा सुधारको रिपोर्ट गरे।
ब्रेन एजिंगलाई उल्टाउँदछ
म्याग्नीशियम L-Threonate प्रयोग गर्मीको दिमाग उमेर उल्टो। अन्वेषकहरूले पुष्टि गरे कि औषधिले दिमागका कार्यहरू नौ बर्ष भन्दा कान्छो देखिन सक्छ।
बुढ्यौलीले मस्तिष्कलाई संकुचित बनाउँछ र मानसिक पतनको लागि अग्रसर गर्दछ। जे होस्, म्याग्नेशियम L-Threonate परिपूरकहरूले यी synapses को नोक्सान रोक्न र neuroplasticity बढाउँदै काम गर्दछ। यसका साथै यसले म्याग्निसियमको दिमागको स्तरलाई इष्टतम स्तर पनि कायम गर्दछ।
म्याग्नेशियम L-Threonate ADHD पूरक चिन्ता र तनाव स्तर कम गर्दछ। औषधिले तपाईको मनलाई उज्ज्वल बनाउँछ, उच्च मानसिक स्पष्टताको साथ तपाईलाई छोड्छ। यसले GABA न्युरोट्रान्समिटरलाई बृद्धि गर्ने र तनाव रसायनको सक्रियतालाई रोक्न कार्य गर्दछ।
रगत दिमाग अवरोधमा, म्याग्नेशियम L-Threonate पूरक दिमागमा छिर्ने बाट तनाव हार्मोनहरू रोक्नुहोस्।
यसका साथै यसले तपाईंलाई डरलाग्दा सम्झनाहरू, वास्तविक धम्कीहरू, र दर्दनाक अनुभवहरूबाट टाढा राख्छ जसले चिन्ता जगाउँदछ।
यदि तपाईं अनिद्रा हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो अनिद्रा फिक्सिंगको लागि म्याग्नेशियम L-Threonate खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। पूरकले तिनीहरूबाट क्याल्सियम भाँचेर मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ। यसले कोर्टिसोल र केही अन्य तनाव हर्मोनहरूलाई पनि कम गर्दछ, जसले मेलाटोनिन र निप लगाउने क्षमतालाई निषेध गर्दछ।
न्युरोडोजेरेटिव रोगहरूको व्यवस्थापन
न्यूरोडोजेनरेटिभ रोग बै banks्कहरूको उपचारमा म्याग्नेशियम L-Threonate एडीएचडी औषधिको सम्भाव्यता यी तथ्यहरू कम म्याग्नीशियमको स्तरमा लि .्क भएको तथ्यमा। न्यूरोसाइन्ट्स मस्तिष्कमा म्याग्नेशियमको कमीलाई एडीएचडी, डिमेन्शिया, र अल्जाइमरसँग जोड्छन्।
यसका अतिरिक्त, म्याग्नेशियम L-Threonate क्याप्सुल लिनाले मानसिक गिरावट र मेमोरी गुमाउनबाट रोक्छ, जुन पागलपन वा Alzheimer को सामान्य स्नायविक प्रभाव हो।
कसरी म्याग्नेशियम L-Threonate लिने
म्याग्नेशियम L-Threonate खुराक सेक्स, उमेर, र इच्छित प्रयोग सहित केहि कारकहरुमा निहित छ। उदाहरण को लागी, १ to देखि -० बर्षे उमेरका बच्चाहरुका लागी एक विशिष्ट डोज लगभग m००mg हो जब कि महिलाहरु लाई 19००mg को लागी प्रयोग गर्दछ। 30१ बर्ष भन्दा माथिको जो कोहीले पनि दुई लिes्गको लागि २०mg बाट मात्रा बढाउन सक्छ।
जब अनुभूति बढाउनको लागि म्याग्नेशियम L-Threonate nootropic लिनुहुन्छ, खुराक प्रति दिन १२००mg सम्ममा शूट हुन सक्छ। यसको विपरीत, रकम m००mg मा घट्छ जब यसको सम्मोहन गुणहरूको लागि म्याग्नेशियम L-Threonate निद्रा पूरक प्रयोग गर्दा।
यस कम्पाउन्डलाईaको रूपमा लिँदा आहार पूरक, तपाइँ प्रति दिन १०००mg र 1000mg बीच प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्राथमिकताका लागि, तपाईंले म्याग्नेशियम L-Threonate क्याप्सुललाई दुई खुराकमा विभाजन गर्नुपर्दछ र बिहान र ओछ्यानमा जानुभन्दा पहिले यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।
त्यहाँ मैग्नीशियम L-Threonate पूरक लिएर कुनै साइड इफेक्ट छन्?
विशिष्ट म्याग्नेशियम L-Threonate साइड इफेक्टमा टाउको दुख्ने र उनी निद्रा पर्छ। निद्रा भनेको आफ्नो अवस्थामा निर्भरता, भेषमा एक आशिष हो। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं अनिद्रा संग संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, म्याग्नीशियम L-Threonate निद्रा औषधि एक झिल्ली पक्रन मद्दत गर्दछ।
यस पूरकले केही अन्य औषधिहरूको दक्षतामा हस्तक्षेप पनि गर्दछ। एन्टिबायोटिक, मांसपेशी शिथिल, रगत पातलो, वा उच्च रक्तचाप औषधीहरू लिँदा तपाईंले आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्दछ। कारण यो छ कि म्याग्नेशियमले फार्माकोडायनामिक्सलाई बिस्तार गर्न सक्दछ।
म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर प्रयोग र अनुप्रयोग
म्याग्नेशियम L-Threonate एक शक्तिशाली नूट्रोपिक हो। यसले मेमोरी गठन, सिक्ने, र ध्यान प्रोत्साहित गर्दछ। यस कारणका लागि, यो न्यूरोडिजनेरेटिव अवस्थाहरू प्रबन्ध गर्नका लागि एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो।
म्याग्नेशियम L-Threonate चिन्ता लाग्ने औषधिले पुरुष ढाँचाको टाउकोलाई उल्ट्याउँछ। L-Threonate कम्पाउन्डले डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) हर्मोनको क्षमता कम गर्दछ, जो कपाल झर्नेको लागि जिम्मेदार छ।
अझ के, निदाउनमा कठिनाई भएका व्यक्तिहरूले निद्राको निवारणका लागि यो औषधि प्रयोग गर्न सक्दछन्। यो मांसपेशिहरु लाई आराम मात्र होइन तर शरीर शान्त गर्दछ चिन्ता र डिप्रेसन कम गर्ने। म्याग्नेशियम L-Threonate समीक्षा मार्फत एक फ्लिक पुष्टि कि अधिक प्रयोगकर्ताहरू पूरै प्रशासन पछि तुरुन्तै निन्द्रा अनुभव हुनेछ।
कहाँ म्याग्नेशियम L-Threonate कच्चा पाउडर किन्न
तपाईं सम्भवतः म्याग्नेशियम L-Threonate संग अड्किनुभयो जहाँ गाइड किन्नु हुन्छ, विचार गर्दै over-the-the काउन्टरको अधिग्रहण nootropics धेरै राज्यहरूमा गैरकानूनी छ। ठिक छ, यो समय तपाईंले खरीदको बारेमा विचार गर्नुभयो पूरक मान्य अनलाइन स्टोरहरूबाट।
हामी स्वतन्त्र रूपमा हाम्रा सबै उत्पादनहरू गुणस्तरीय नियन्त्रण प्रयोगशालाहरूमा उत्पादन गर्दछौं। तपाईं थोरैमा म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर खरीद गरेर अधिक बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
म्याग्नीशियम L-Threonate केको लागि राम्रो हो?
म्याग्नीशियम L-Threonate ट्याब्लेट संज्ञानात्मक समारोह र मेमोरी गठन समर्थन गर्दछ। अन्य जस्तो छैन म्याग्नेशियम प्रकारहरू, यो कम्पाउन्ड रगत-मस्तिष्क बाधा को लागी हेर्न योग्य छ। यो एक हो न्यूरोप्रोटेक्टिव नूट्रोपिक.
अधिक, न्यूरोडोजेरेटिव रोगहरूसँग संघर्ष गरिरहेका बिरामीहरूले उनीहरूको सर्तहरू प्रबन्ध गर्न म्याग्नीशियम एल-थ्रोनोटेट किन्न सक्छन्।
मैले कहिले मग्नेशियम L-Threonate लिनु पर्छ?
तपाईंले बिहान र सुत्ने बेला भन्दा पहिले यो पूरक लिनु पर्छ। एउटा म्याग्नेशियम एल थोरैनेट साइड इफेक्ट चक्कर आउँछ। तसर्थ, यो तपाइँको लागि आदर्श छ यो रातको प्रबन्ध गर्नुहोस्।
कुन प्रकारको म्याग्नेशियम उत्तम हो?
त्यहाँ पाँच भन्दा बढी प्रकारका छन् म्याग्नेशियम पूरकहरू, जुन फरक तरिकाले काम गर्दछ। तसर्थ, तपाइँको प्राथमिकता जो को शरीर प्रक्रिया को लागी तपाइँ प्रबंधन गर्न चाहानुहुन्छ। उदाहरणका लागि लिनुहोस्, जो कोही पनि अनुभूति बढाउन र मस्तिष्कको कार्यहरू बढावा दिन पछि मैग्नीशियम एल-थ्रोनोनेट अन्तिम विकल्प हो।
यसको समकक्षहरू जस्तो छैन, म्याग्नेशियम एल थोरैनेट चिन्ता औषधीको रगत-मस्तिष्क बाधा पार गर्ने प्लसको साथ एक उच्च बायो उपलब्धता छ।
के मैग्नीशियम L-Threonate चिन्ताको लागि राम्रो छ?
म्याग्नेशियम L-Threonate ट्याब्लेट सेवन गर्नाले तपाईंको मुडलाई कम गर्दछ, तनाव कम गर्दछ, र चिन्ता कम गर्दछ। यसको शान्त प्रभावले यसलाई एक आदर्श एनिसियोलाइटिक औषधि बनाउँदछ।
के म्याग्नीशियम L-Threonate रक्तचापको लागि राम्रो छ?
म्याग्नेशियम L-Threonate क्याल्शियम च्यानल अवरोधकको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ। औषधिले रक्तचापलाई 5.6..2.8 / २.XNUMX मिमी Hg सम्म कम गर्दछ। अध्ययनले पुष्टि गर्दछ कि यसले ईस्केमिक स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी मुटुको अवस्था, र हड्डी सम्बन्धी अतालता सहित हृदय रोगहरु लाई रोक्छ।
मैग्नीशियम L-Threonate खुराक को प्लस यो हो कि तपाईं यसलाई धेरै एन्टिहाइपरटेन्सिभ औषधिहरूद्वारा प्रशासित गर्न सक्नुहुन्छ।
म्याग्नेशियम L-Threonate काम गर्न कति समय लाग्छ?
म्याग्नेशियम L-Threonate लाभ एक महिना पछि स्पष्ट हुनेछ, विशेष गरी यदि तपाईं अनुभूति को लागि पूरक मा बैंकिंग गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि मस्तिष्कमा म्याग्नीशियमको स्तर बढाउन कम्तिमा चार हप्ता आवश्यक छ, जुन मेमोरी गठनको लागि उपयुक्त छ।
यदि तपाईं अनिद्राको उपचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, पूरक लगभग तुरून्त काम गर्दछ। चिन्ता, उदासीनता, र पोस्ट-ट्राउमेटिक तनाव डिसआर्डरहरूको लागि, म्याग्नेशियम एल-थ्रेओनेट समीक्षाले पुष्टि गर्दछ कि प्रभावहरू एक हप्तामा ध्यान दिनुहोस्।
शेन, वाई, एट अल। (२०१ 2019) म्याग्नेशियम-एल-थ्रोनोनेटको उपचारले सेरेब्रोस्पिनल फ्लुइडमा म्याग्नेशियमको स्तरलाई माथि उठाउँछ र पार्किन्सन रोगको माउस मोडलमा मोटरको कमी र डोपामाइन न्युरोन नोक्सान कम गर्दछ। न्यूरोप्सिचिअक्रिकिक रोग र उपचार।
स्लुत्स्की, आई। र अन्य। (२०१०) ब्रेन म्याग्नेशियमलाई माथि बढाउँदै सिकाई र मेमोरीको बृद्धि। खण्ड 65 2, अंक २, p143-290।
मिकीली, एजी, एट अल। (२०१ 2013) क्रोनिक डाईटरी म्याग्नेशियम-एल-थोरियोनेट वेग लोप हुन्छ र एक कन्डिशन्ड स्वाद एभर्शनको सहज रिकभरी कम गर्दछ। फार्माकोलजी, बायोकेमिस्ट्री, र व्यवहार, खण्ड 6, पी १-16-२26।
वी, ली एट अल। (२०१ 2014)। मस्तिष्क म्याग्नेशियमको उर्जा Synaptic हानि रोक्छ र Alzheimer को रोग माउस मोडेलमा संज्ञानात्मक घाटा उलट गर्दछ। आणविक मस्तिष्क
जाराटे, कार्लोस एट अल। (२०१ 2013) उपचार प्रतिरोधक डिप्रेशनको लागि नयाँ प्याराडिग्म्स। न्यूयर्क अकादमी अफ साइंसको उद्घोषणा।
Wroolie, TE, एट अल। (२०१ 2017) डिमेन्शियासँग बिरामीहरूमा म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोनेटको ओपन-लेबल ट्रायल। वृद्धावस्थामा इनोभेसन, खण्ड १।
कच्चा म्याग्नेशियम (२ आर, S एस) -२,2-ट्राइहाइड्रॉक्सीबुटानोट पाउडर (3 2,3,4१778571--57-))